Izimvo zokuhombisa ze-DIY kumagumbi okulala | Imisebenzi yezandla
Izimvo zokuhombisa ze-DIY kumagumbi okulala
Imisebenzi yezandla | 25/09/2021 10:22 | Imisebenzi yasekhaya
Ukuhonjiswa kwamagumbi okulala ungakhetha phakathi kokuthenga izinto ezahlukeneyo ofuna ukuzibeka, ezinje nge isitulo esinengalo okanye isibane setafile, kunye nokwenza iziqwenga zakho. Kule nqaku sibona ezinye Izimvo zokuhombisa ze-DIY kumagumbi okulala onokuyenza ngezandla zakho ukunika umnxeba kwelo gumbi lisondeleyo.
1 Izimbozo zomqamelo
5 Ubugcisa bodonga
7 Udonga lwezibane
8 Ifenitshala encedisayo ebuyiselweyo
Las izigqubuthelo zomqamelo Zingaba lula kakhulu ukuzenza okanye zicace ngakumbi, kuxhomekeke kukuthanda kwakho. Kwaye ngaphezu kwako konke, ngentando yakho. Kananjalo, awunyanzelekanga ukuba uthenge imitya emitsha, susa nje izigqubuthelo ezindala okanye ugqume imiqamelo ngokwazo.
Imiqamelo iyasebenza kwaye, ukongeza, i ibhedi iya kuba ntle kakhulu. Unokuba nokuninzi kangangoko ufuna. Ungazitshintsha izembozo ukuze zilungele ixesha lonyaka okanye iminyhadala ofuna ukuyigqamisa kumhombiso, njengeKrisimesi, iHalloween, uSuku lweValentine, njl.
Ukuba usebenzisa amakhethini unako zenzele ngokwakho. Kulula ukutshintsha kwaye zinokudityaniswa nezinye izinto zokuhombisa iimpahla, kubandakanya neziciko zomqamelo. Nangona ukuzitshintsha kuthatha umsebenzi omncinci, unokukwenza ngokwexesha lonyaka okanye xa ufuna ukunika igumbi lokulala umoya owahlukileyo.
I-headboard yebhedi nayo igumbi lokuhombisa igumbi lokulala onokuzenza. Ungayenza ngamalaphu ukuthelekisa ezinye izinto, sebenzisa izinto ezirisayikilishwe, khetha izinto ezenziwe ngomthi, njl.
Okunye Izinto zokuhombisa ze-DIY onokuzenzela zona zizibane, zombini isilingi kunye nezinye izincedisi zetafile. Ungayidibanisa ngokulula kunye nezinye izinto ozenzileyo okanye nabanye ozithengileyo, okanye usebenzise nje izinto ezahlukileyo. Ungasebenzisa imicu yendalo okanye izinto ezihlaziyiweyo, kunye namalaphu kunye nezinye izinto ezintle, ukuba unqwenela.
Sithi ubugcisa bodonga kuba eli gama lingena kuyo nayiphi na into onokuyixhoma, ukusuka kwimizobo ukuya kwiifoto ukuya kwi-textile mosaic, indalo yesinyithi, uyilo lwejometri, iigaranti, ukubamba amaphupha, okanye nantoni na enye onokucinga ngayo, enje ngezinto ezibanzi. kwizinto ezinokuphinda zisetyenziswe. Ungadlala ngeemilo, izixhobo kunye nezibane.
Iipoufs zizinto zokuhombisa eziluncedo kakhulu. Kwigumbi lokulala, kuxhomekeke kubude nakwimo yabo, banokusebenza njengamashiti, njenge Izinto ezincedisayo zokuhlala phantsi okanye ukushiya iimpahla ukuba uza kunxiba. Kwaye ungazenza ngokwakho. Kuya kufuneka ukhethe isitayile kwaye ungene emsebenzini.
Endaweni yokusebenzisa izibane ezincedisayo okanye njengezincedisi kwezi unako Beka imitya yeebhalbhu ezincinane eludongeni ukuxhoma kakuhle, kakuhle phakathi kwefanitshala kunye nezinto zokuhombisa kwigumbi lokulala. Ungafezekisa iziphumo ezintle kwaye wenze imeko enomtsalane.
Ifenitshala encedisayo ebuyiselweyo
Unako buyisela ifanitshala yezinto zakudala kwaye ubanike imbonakalo oyithandayo. Unokubanika umoya wale mihla okanye oqhelekileyo, okanye ubabuyisele kwisitayile seediliya. Unokukhetha okuninzi, ukusuka kwiishelufa ukuya kwiitafile zebhedi, uhamba ngezibuko, iishelfu zodonga okanye izinto ezixhonyiweyo, iitafile ezisecaleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yasekhaya » Izimvo zokuhombisa ze-DIY kumagumbi okulala
I-superhero elula eneentonga zobugcisa kunye nekhadikhadi